Guuleysiga xiligan macluumaadka aadka loo daneeyo muhiimad weyn ayey u leedahay amniga. Toddobaadkii la soo dhaafay, Al-Shabab, oo ah urur argagixiso, ayaa ku eedeeyay Taliska Mareykanka in ay macluumaad khaldan baahiyeen ka dib weerarkii naxdinta badnaa ee ka dhacay Kenya halkaas oo saddex Mareykan ah ay ku naf waayeen.
By U.S. Air Force Col. Christopher Karns, U.S. Africa Command Public AffairsStuttgart, GermanyJan 16, 2020
1 photo: Fikrad: Beenta, Xaqiiqooyinka, iyo Muhimadda ka jawaabidda beenta
Petty Officer 2nd Class Evan Parker
Photo 1 of 1: Somali national army soldiers stand in formation during a logistics course graduation ceremony. Soldiers from Somali’s advanced infantry DANAB battalion spent 14 weeks training with the U.S. 10th Mountain division on the importance of logistical operation as well as the operation and maintenance of heavy equipment. (Photo by MC2 (SW/AW) Evan Parker. Released) Download full-resolution version
Waa muhiim in si dhakhso loo sharraxo sida ay wax u dhaceen.
War-saxaafadeed ay soo saareen ururkan argaggixiso waxaa ay qoraal gaaraya 200ereyo kula hadleen Taliska Mareykanka ee Afrika iyo gaar ahaan dadaalladeenna is-gaarsiinta. Sheegashadooda in toban iyo toddoba Mareykan ah la dilay waa been. In kasta oo ereyadoodu aysan aaminin dad badan, haddana waxaa muhiim ah in eedeymahooda iyo fikradahooda si dhakhso leh loogu hortago sida uga dhakhsiyaha badan.
Eedeeyntooda, sida inta badan wax soo saarkooda saxaafadeed laga dheehdo, waa buunbuunin iyo been, laakiin ereyadoodu waxay muujinayaan hal xaqiiqo oo muhiim ah.
Taas oo ah in Al-shabaab ay khatar ku yihiin Mareykanka haddii aan wax laga qaban, waddanka Mareykanka. Tani waa run. Waxaa muhiim in xaqiiqadan aan lagu dhex iloobin wararka sida baaxadda leh loo tebiyo ee Iiraan, Shiinaha iyo xitaa Ruushka.
Mareykanka waa inaysan hilmaamin saameynta kooxdan argagaxiso ku yeelan karto waddanka Mareykanka. Al-shabaab waa xoogsheegasho. Mararka qaarkood in si toos loo waajaho qofka xoogga sheegta waa tallaabo loo baahan yahay si looga hortago waxyeelada mustaqbalka. In kasta oo weerarada cirka aysan keenin xal waara ee mushkilada argagaxisada, waxay abuurayaan jahwareer urur oo ku imaan kara Al-shabab iyo edbin wax ku ool ah. Weerarada cirka, gaar ahaan kor-ka-daawasho hubeysan, ayaa waxay keentaa faa’ido an dheeli-tirnayn iyo si fiican u aqoonsashada cadowgan. Cadaadiska saaran kooxdaan ka hawlgasha Afrika wuxuu ka ilaaliyaa inay qatar ku noqdaan Mareykanka. Argagixisadan ayaa leh qorshayaal is-ballaarin si ay u beegsadaan Mareykanka, laakiin hawlaha ka socda Afrika, ee ay wadaan bah-wadaagta Afrika, Mareykanka, iyo beesha caalamka, ayaa ka hortagaya inay tani dhab noqoto.
Maanta, dambiilayaashan rabshadaha wata ayaa maalin walba khatar ku ah Bariga Afrika, gaar ahaan Soomaaliya. Si aan kala sooc lahayn ayay dadka u dilaan. Tani waxay caddaatay markay ahayd Disember 28 markii ay xasuuqeen in kabadan 80 qof oo rayid ah oo aan waxba galabsan oo ku sugnaa Muqdisho. In kasta oo argagixisadu ay yihiin halis oo ay tahay in si dhab ah loo ogaado, hadana waxay sidoo kale ku takhasusay beenta si ay shaki uga abuuraan ka go’anaanshaha beesha caalamka ee yareynta saameyntooda. Khatar ayaa jirta haddii sheekooyinkooda beenta ah loo qaato runta taas oo abuuri karta shaki.
Qeexidda runta waxay muhiim u tahay ka hortagga Al-Shabab iyo sii wadida aaminaada shacbiga Mareykanka iyo Afrika.
Al-Shabab waxay ku eedeysay Taliska Mareykanka ee Afrika dacaayad iyo been. Waxaan kuu xaqiijinayaa in tani aysan ahayn wax jira. Waan ognahay inaan lumin karno kalsoonida, ixtiraamka, iyo runta aan raadineyno. Marnaba kuma xadgudbi doonno qiyamkeenna iyo sharafteena. Erayga Mareykanka waa muhiim waxaana jirta feejignaan lagu ilaalinayo magaca Mareykanka.
Aaminaad iyo ixtiraam. Tani waa waxa aan u hayno dadka Soomaaliyeed, Kenyanka iyo bah-wadaagta Afrika. Waxay si firfircoon ula dagaallamayaan Al-shabaab si ay Afrika iyo kuwa kaleba uga badbaadiyaan dambiilayaashaan iyo argagixisadan. Furaha ka adkaanshaha ugu dambeysa ee al-Shabab waxaa iska leh saaxibadeenna Afrikaanka ah, laakiin taageeradayada ayaa loo baahan yahay. Waa tababarka aan bixinno kaas oo leh qiimo waqti dheer ah iyo sidoo kale waxa ay Waaxda Arrimaha Dibadda Mareykanka iyo USAID ku bixiyaan horumarka.
Runta ayaan sheegnaa. Waxaan bixinaa xaqiiqooyin, iyo tusaale ahaan marka macluumaadka wax iska beddelaan ama aanan ku caddeyn xiriirkeenna waan saxi karnaa wixii dhacay. Waqti ayaan u qaadnaa inaan fahamno xaqiiqada. Tani waxay mararka qaar naga dhigi kartaa in nalaga dareemo waxyar oo gaabis ah laakiin ma rabno in aan war an sax ahayn la deg degno sababtoo ah waxaan aqoonsannahay sida ay muhiimka u tahay la xiriika dadka. Markay beentu soo baxdo, waxaan u baahan nahay inaan runta kaga hortagno. Markii ay soo baxeen warar been abuur ah oo ku saabsan geerida Jeneraal Stephen Townsend, oo ah Taliyaha Taliska Mareykanka ee Afrika, isla markaaba wuu ka soo jawaabay. U halganka si loo ilaaliyo runta waa mid aad muhiim u ah maxaa yeelay xanta iyo macluumaad khaldan waxay carqaladeeyaan horumarka.
Waayihii hore, waxaan maqlay dad ka faalloodaa sida ay ururada argagixisada wax ku ool ah ugu yihiin isgaarsiinta. Al-Shabab wax ku ool kuma aha isgaarsiinta. Waa tan sababta. Markaad been sheegto oo aad si joogto ah ugu u isticmaasho macluumaad khaldan, waxay dhistaa aasaas xun oo kaa hor keenayo dadka aad rabto inaad la xiriirto oo aad xiriir la sameysato. Al-Shabab waxay u ordayaan in la aqoonsado. Tani waa sababta ay u bilaabeen adeegsiga war-saxaafadeedyada oo ay sii wadaan inay isticmaalaan fiidiyowyada si ay u gudbiyaan ujeedadooda. Mid kastaaba waa isku day quus ah oo ay ku raadinayaan aqoonsasho iyo sharciyad laakiin sumcadooda ayaa aad ugu qotonta nacaybka iyo rabshadaha. Muuqaalkoodii ugu dambeeyay waxaa ka mid ah khaladaad fara badan, qeybta ugu dambeysa ee fiidiyowgooda waxay ku dareen muuqaal Osama bin Laden oo xoojinaya xiriirka kooxda ee al-Qaacida.
Runta ku saabsan cadowgan. Al-shabaab waa urur xiriir la leh al-Qaacida. Si aan kala sooc lahayn oo aan taxaddar lahayn ayay u dilaan dadka. Dembiilayaashan rabshadaha wata waxay khatar ku yihiin danaha Mareykanka.. Sida Bin Laden, waxay soo gudbiyeen qorshe ay ku weerarayaan Mareykanka Sida aan ku sheegnay war-saxaafadeedka 5-tii Noofembar, “al-Shabab waxay sii daayeen muuqaal 52-daqiiqo ah oo uu kaga hadlay hogaamiyaha al-Shabaab Ahmed Omar Abu Ubeyda isagoo ku baaqaya in la weeraro Mareykanka meel kasta oo ay joogaan, isagoo sheegay in shacbiga Mareykanka ay yihiin bartilmaameed sharci ah, isla markaana ku celcelinaya dhowr mawduucyo kale oo ku saabsan jihaadka ah oo laga daawaday cajalado taariikhi ah oo Osama Bin Laden ka yimid. Argagixisadan ayaa sii wada xoojinta sheekadan kadib weerarkii 5-tii Jan waxayna soo saareen muuqaal kale oo lagu xoojinayo xiriirkooda Al-Qaacida, oo ah kooxda argaggixisada ee soo weerartay Mareykanka, Sept. 11, 2001.
Kuwani waa xaqiiqooyinka dadka Mareykanka, bah-wadaagta Afrika, iyo saaxiibbada ay u baahan yihiin inay fahmaan oo ay ka digtoonaadaan.
Waxaa naga go'an inaan ka caawino dadka inay fahmaan oo ay gartaan dabeecadda iyo ujeeddada cadowga iyo sidoo kale hawlgaladooda xun ee ay ka wadaan qaaradda.
Mareykanka dadaalkiisa wax ku oolka ah wuxuu gacan ka geysanayaa sidii dalka Mareykanka, Afrika, iyo bah-wadaagta caalamiga ay ammaan u noqon lahaayeen. Hawlaheena qaarada waxay gacan ka geysanayaan sidii loo burburin lahaa himilooyinka Al-shabaab ee ku wajahan dalka Mareykanka. Hawlaha an ka wadno qaaradda ayaa muhiim u ah Afrikaanka iyo Mareykanka. Cadaadiska lagu beegsanayo ururka Al-Shabaab maanta macnihiisu waa Mareykanka oo aamaan ah — maanta iyo mustaqbalkaba. Tani waa runta.
Kornaylka Ciidamada Cirka Christopher Karns waa afhayeenka Taliska Mareykanka ee Afrika.
Qoraalka tifaftiraha: Kani waa qoraal fikradeed, sidaas daraadeed fikradaha la soo bandhigay waxay gooni u yihiin qoraaga. Haddii aad jeceshahay inaad ka jawaabto, ama aad leedahay qoraal fikradeed aad adigu jeclaan lahayd inaad soo gudbiso, fadlan kala xiriir maareeyaha tifaftirka ee Military Times